I-TLEE Spas ityhila iprojekthi yamva nje: iWillowbrook Spa eLake House eCanandaigua
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » I-TLEE Spas ityhila iprojekthi yamva nje: iWillowbrook Spa eLake House eCanandaigua
Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Indawo yaseWillowbrook kwiLake House kwiCanandaigua
I-TLEE Spas, inkampani eyaziwayo yokuphuhlisa i-spa enobuchule bokuyila, indlela eqhutywa kukwamkelwa iindwendwe, iwongekile ngokutyhila iWillowbrook Spa, esandula ukubonakala kwiLake House eCanandaigua, ihotele eyiyila phambili kunye nendawo yokuhlala ephefumlelweyo kunye ne-spa kwiFinger entle Ummandla wamachibi eNew York. Indawo entsha yempilontle ithatha inkuthazo kwindawo yayo engaphambi kwechibi kunye nobuhle obungacocwanga beLake Finger, eyaziwayo ngeembono ezifanelekileyo zekhadi lamachibi kunye neenduli ezijikelezayo nanjengommandla wezolimo osisityebi kwimbali yalapha.
Indawo entsha yempilo entle ibuyisela kwakhona kwaye ikhuthaze ii-saunas ezinamanzi kunye nonyango olwenziwe ngokwezifiso.
ILake House ifumene ulwamkelo kuLuhlu oluTshisayo lwabahambi bakaCondé Nast 2021 nanjengolunye lwezona zintle: iihotele emhlabeni, iihotele ezizinzileyo emhlabeni, iihotele eMelika naseCanada, kunye neehotele zendalo kwihlabathi liphela.
I-Willowbrook Spa igcwalisa i-vibe yehotele ngokufikelela ngokuthe ngqo kwigadi echumileyo, indawo ethe cwaka yolwandle, kunye nonyango.
Xa iLake House ivule ihlobo ephelileyo, ngexesha lobhubhane we-COVID-19, ukubuyela kukhenketho lwengingqi kunye nokucothisa kwezokhenketho kuvelise ubuzaza obukhulu kwipropathi, apho iindawo zangaphakathi nangaphandle zihamba ngokwendalo zize zenze umva omhle wenkumbulo yobomi bonke. Kutshanje kubonisiwe kuTyelelo + loLonwabo kuLuhlu lwayo lowe-2021, ukhetho lweehotele ezintsha ezilungileyo kwihlabathi, iLake House ikwafumene ukwamkelwa kuLuhlu oluTshisayo lwabahambi bakaCondé Nast 2021 nanjengezona hotele zintle kwihlabathi, eyona ilungileyo ezizinzileyo iihotele emhlabeni, ezona hotele zintle eMelika naseKhanada, kunye neehotele ezintle zendalo kwihlabathi liphela. Ukuhambisa indawo enomtsalane yendalo, iWillowbrook Spa igcwalisa ubuhle behotele, indawo ekhululekile kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwigadi entle kunye nolwandle oluzolileyo, kunye nonyango olulungiselelwe iinjongo zokuba sempilweni.
"UWillowbrook Spa uthobela umva kubukho be-analogue yokubhiyozela unxibelelwano lomntu, ukuhamba kancinci kobomi, kunye namava angaphandle," utshilo uLee. "Sisebenzisa ubulumko bendawo yasekuhlaleni kunye nokuxhuma kwindalo yendalo ngokusebenzisa i-spa yoyilo, iimveliso ezisebenzayo kunye neenkonzo eziqhutywa ziziphumo."
Umxube wempembelelo-kubandakanya ilizwe lokuphila kwewayini kunye nobugcisa bobugcisa- iWillowbrook Spa yindawo yemvelo yokuziqhelanisa nentlalontle ngeendlela ezininzi, ukusuka ekuhambeni okunengqondo phakathi kweendawo ezizolileyo kunyango lwangaphandle kunye nokubuyela kwempelaveki. Njengommandla weLinger Finger ukwaziwa njengeyona ndawo iphambili yewayini kunxweme olusempuma ye-United States, Ii-spas ze-TLEE yajonga kwindawo eyaziyo kakuhle, ilizwe lewayini laseCalifornia, kunye nezinto ezifakiweyo ezanceda ukuchaza indlela yokuphila eyahlukileyo kumava amatsha e-spa. Igumbi lelanga yindawo yokuphumla ebonisa ubuninzi bokukhanya kwendalo, ukuhamba komoya okutsha, kunye neembono ezikhuthazayo malunga negadi ye-Spa, equka iipodesi ezintathu zaselwandle ezibonisa ngasese ezinamanzi angaphandle kunye neendawo zokuphumla ezenza i-al fresco eyahlukileyo yokujikeleza kwesekethe kubantu ngabanye, izibini okanye amaqela amancinci. Kwindawo ejikelezileyo, iindawo ezininzi zokuhlala zinokwandisa amava okuphumla ngaphandle, ukubonelela ngesimo esiphefumlelweyo sokucinga okanye ibandla elikhuselekileyo kwezentlalo.
Ikhuthazwe lilifa lemveli lokutyeba lokulima, okuthe kwabangela ukuvuselelwa kwezolimo kumgangatho wehlabathi wezinto zokupheka kunye nokuvuselelwa kunyango lwendalo, uWillowbrook Spa usebenzisa amayeza ezityalo ukukhuthaza impilo yonke kwaye kubandakanya neminikelo yokuhlaziya eyonyuselweyo ukuphakamisa amava eendwendwe. Ngabom ilula kwaye icingisisiwe, imenyu ye-spa inikezela ngamava okhethekileyo, kubandakanya unyango olusekwe kwiseshoni kunye nokusayina utyikityo lwepropathi olunikezela ngobuchwephesha bokumisela kunye neoyile efakwe ngamayeza kunye namayeza okusombulula ukuhambelana nobukrelekrele obunomdla ugqirha. Ngokunikezela ngenkonzo eyahlukeneyo ebhenela ngokulinganayo kwii-novices kunye ne-die-hards ngokufanayo, iWillowbrook Spa imema iindwendwe ukuba ziphakamise impilo yazo etyebileyo ngokutshintsha, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, kunye nokuzihlaziya kulwandle olungaselunxwemeni lweCanandaigua Lake ngeli hlobo nasehlotyeni.
Ukongeza kwi-Spa yeWillowbrook, i-TLEE Spas kutshanje iphuhlise inkqubo ye-Spa yaManzi oLwandle e-Gurney's flagship Montauk Resort, ekucwangciswe ukuba ivule ngasekupheleni kuka-2021 empuma ye-Long Island. I-TLEE Spas ijolise ekubambeni imodeli yempilo-ntle kumthombo wamanzi olwandle okhethekileyo kunye nendawo ephambili yolwandle, apho ukuphilisa kwendalo kwamanzi atyebileyo amaminerali kunye nomoya ofakwe ityuwa kuthatha inqanaba eliphambili. I-Willowbrook Spa e-The Lake House kunye ne-Spa yaManzi oLwandle e-Gurney's Montauk izakudlala indima ebalulekileyo ekuphakamiseni amava ezempilo kwiindawo zabo zamachibi kunye nolwandle, bemema iindwendwe ukuba zinxibelelane nendalo ngaphakathi kweendawo ezintsha zempilo ezakhiwe ziimpawu ezizodwa zesiza kunye nemeko yendawo .
Malunga neTLEE Spas
I-TLEE Spas izisa inqanaba elingenakuthelekiswa nanto lomnqweno, ubuchwephesha kunye nokuziqhelanisa nokudala iiaspas ezikhethekileyo kunye namava okuphila. Basondela kwiprojekthi nganye ngamehlo amatsha, bekhangela iindlela zokunyusa ibha kunye nokuyibeka ngokwahlukeneyo, kunye nengxelo eqinisekisiweyo yempumelelo ngokuqokelela iiprojekthi eziwonga amabhaso, abathengi abaqondayo kunye neempawu eziphambili. Ngolwazi oluthe kratya malunga neTLEE Spas, ndwendwela www.sifumabela.com .